Lalam-baovao "Rocade Est" :: Mandeha haingana ny asa etsy Andranobevava • AoRaha
Lalam-baovao « Rocade Est » Mandeha haingana ny asa etsy Andranobevava
Mandroso be ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy an’Andranobevava sy By-Pass na ny Boulevard de Tokyo sy Soamanandrariny amin’Ambohimahitsy, na ilay tetikasa « Rocade Est-NordEst ». Mandeha haingana ny asa amin’ny fanorenana ny teboka fihodinan’ny fiara na « rond point » etsy Andranobevava. Mitoetra hatrany ny vinavina amin’ny fisokafan’ity lalam-baovao ity afaka telo volana.
“Ny 92%-n’ny asa no vita amin’izao fotoana izao. Any amin’ny faramparan’ny volana jona any no tombanana hitokanana azy. Famitana ny fandrakofana tara farany ambony amin’ny arabe hifamoivoizana na “couche de roulement” sisa no atao”, hoy Rahaingosona Harifidy, talen’ny serasera ao amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, omaly.
Notsindriany fa efa mamarana ny fanonerana ireo tany sy trano voakasiky ny fanamboaran-dalana izy ireo ankehitriny. Marihina fa anisan’ny asa vatsian’ny Vondrona Eoropeana vola eto amintsika ny fanamboarana ny arabe vaovao mirefy 8,2km, izay mizara sampanan-dalana efatra mampifandray ny lalampirenena RN7 sy ny RN2 ary ny RN3 amin’Antananarivo renivohitra.
Fividianam-panafody :: Ilaharana hatrany eny amin’ireo farmasia
Sakanan ara-pahasalamana :: Nosokafana ny maraina tontolo ny lalam-pirenena fahafito